Sheekh Umal oo jawaab culus ka bixiyey hanjabaad uga timid Al-Shabaab (Daawo) - Caasimada Online
Home Warar Sheekh Umal oo jawaab culus ka bixiyey hanjabaad uga timid Al-Shabaab (Daawo)
Sheekh Umal oo jawaab culus ka bixiyey hanjabaad uga timid Al-Shabaab (Daawo)
Nairobi (Caasimada Online) – Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kamid ah culumada Soomaliyeed ayaa markii u horeysay sheegay inay soo gaadhay hanjabaad halis ku ah noloshiisa, ugana timid kooxda Al-Shabaab oo ku xoogan gudaha dalka.
Sheekh Umal ayaa sheegay in uu ka warhayo in dil ugu xukuman yahay Al-Shabaab, ayna diyaariyeen shaqsiyaadkii fulin lahaa weerarkaas oo ay la joogaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
“Waxay ku tala-gashan yihiin inay dilaan culimo aan kamid ahay, waxayna naga soo gaartay ilo kala duwan oo xataa xarakada dhexdeeda ayey naga soo gaartay. Waxaa iska fudud in qofkii yiraahda waxaan uu qaldan yahay oo shareecada ma waafaqsana in dhigiisa la baneysto,” ayuu yiri.
“Ilo kala duwan ayay naga soo gaartay waa kuwa kala gedisan oo Soomaaliya joogay, macluumaadka nasoo gaaray xataa way tilmaamayaan in raga loogu tala-galay qorshahaan ay nala joogaan Kenya.”
Sidoo kale waxa uu sheegay in ujeedada u weyn ee laga leeyahay hanjaabadaha uga imanaya Al-Shabaab ay tahay baqdin galinta iyo in uusan ka hadlin qaladaadka Diimeed ee ay ku jiraan kooxdaas.
“Naftaan waqti ayey leedahay kasoo hormari meyso oo ka dib dhici mayso. Waxa leenahay sida rajeynayo mashruuca ah in aan baraarujino wixii khalad ah waa sii wadeyna oo joojin meyno.”
Ugu dambeyntiina wuxuu ugu baaqay dhalinyarada ka bar-bar dagaalama xarakada Al-Shabaab inay ka towbad keenaan, waxay ku jiraan oo ay ku kadsooman afkaarta qalafsan ee Shabaab kusoo xero galiso dhalinyarada.